SAWIRO-Gudoonka Hayada Shaqaalaha Qaranka Oo Tababar Usoo Gunaanaday 90 Hablood Oo Hargaysa Ku Sugnaa
Sunday March 10, 2019 - 19:47:46 in Wararka by Wakiilka Ceerigaabo
Hargaysa(Horseednews)Ujeedada kulankooda ayaa ahaa sidii loo siin lahaa tababaro isugu jira; qorshaynta hawl-qabadyada, maaraynta xafiisyada, la qabsiga goobaha shaqo, hogaaminta iyo abuurida hiigsi halbeegyo wata.
Hargaysa(Horseednews)Ujeedada kulankooda ayaa ahaa sidii loo siin lahaa tababaro isugu jira; qorshaynta hawl-qabadyada, maaraynta xafiisyada, la qabsiga goobaha shaqo, hogaaminta iyo abuurida hiigsi halbeegyo wata. Ujeedada kulankooda ayaa ahaa sidii loo siin lahaa tababaro isugu jira; qorshaynta hawl-qabadyada, maaraynta xafiisyada, la qabsiga goobaha shaqo, hogaaminta iyo abuurida hiigsi halbeegyo wata.
Dhanka kale, intii casharadu socdeen waxa ay fursad u heleen in ay dhexdooda is bartaan sidaoo kalena ay yeeshaan xidhiidho walaalnimo oo dhaw iyaga oo u ballamay kor-u-qaadida adeega shacabka ee heer gobol iyo mid qaran-ba
Jidka loogu jiro Qaran Qalinku Qiimo Leeyahay…